I-Sonication - Izicelo Nezinzuzo - I-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Sonication - Izicelo kanye Izinzuzo"
I-Sonication (ebizwa nangokuthi i-ultrasonication) iyisicelo semvamisa ephansi, amagagasi aphakeme kakhulu e-ultrasound abe yi-liquid noma i-pastes medium. I-cavitation ye-acoustic eyenziwa yi-sonication enkulu idala izimo ezinamandla-ezinamandla njengokucindezela okuphezulu nokushisa okuhlukile kanye namandla amakhulu we-shear ne-turbulences. Lawo ma-ultrasonically generated force aphula ama-particles nama-droplets, aphazamise amangqamuzana futhi aqale ukusabela kwamakhemikhali. Ngenxa yale miphumela, i-sonication isetshenziselwa ukuhlanganiswa kwamanzi, ukukhishwa kwemanzi & ukuhlakazeka, emulsification, isizinda kanye ne-sonochemistry. Funda kabanzi mayelana nezinzuzo eziningi ze-sonication futhi ufunde ukuthi inqubo yakho ingazuza kanjani ekusebenziseni amandla we-ultrasound!